Dib u Dhac: Mushaarrooyinka Shaqaalaha Saab - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dib u Dhac: Mushaarrooyinka Shaqaalaha Saab
La cusbooneeyay torsdag 25 augusti 2011 kl 11.51
La daabacay torsdag 25 augusti 2011 kl 09.30
Maanta iyo berito oo jimce ah ayaaney mushaarradahoodii heli doonin shaqaaalaha ka
howl-gala shirkadda gawaarida ee Saab, maadaama uu dib u dhac ku yimid bixintii mushaarooyinka.
Shirkadda Saab ayaa u baahan dhaqaale gaarsiisan 100 malyuun oo koron sidii ay ugu bixin lahayd mushaarooyinka 3 800 ruux ee ka howl-gala shirkadda.
Gunilla Gustavs oo ka howl-gasha waaxda war-bixinta ee shirkadda ayaa ka gaabsatay inay ka jawaabto goorta shirkaddu ay shaqaalaheeda siin doonto mushaarooyinkooda.
Mattias Larsson wuxuu sanooyin fara badan ka soo howl-galayay shirkadda Saab sidan ayuuna dareenkiisa uga muujiyay mushaarooyinka bilahan dambe soo daaha:
- Wax lagu farxo maaha. Mar walba waxay rajadeenu ahayd in mushaarku nagu soo gaari doono xilligii la qaadan jiray, inkastoo haddana ey noo muuqatay in sidaa wax u dhici karaan. Waa wax laga xumaado. Nasiib wanaag xaaskayga ayaa shaqeeysa, marka mushaarkeeda iyo xoogaagii aan horay u aruursanay ayaan isku jafjafan doonaa. Aan aragno halka ay na gaarsiiso.
Gunilla Gustavs oo ka howl-gasha waaxda war-wararka ee shirkadda ayaa raali-gelin ka bixisay mushaarooyinka daahay, hase yeeshee ka gaabsatay inay ka jawaabto goorta shirkaddu ay shaqaalaheeda siin doonto mushaarooyinkooda.
- Taariikh mucayin ah oo dejisan ma jirto, haseyeeshee waxaan ku jirnaa dadaal intii tabarteena ah.
Sidoo kale hayadda aruurinta deeymaha khasabka ayaa ka dhowraysa shirkadda Saab dhaqaale cagacageeynaya 50 malyuun ee koronka iswiidhishka, islamarkaana indhaha ku haysa account-iga shirkadda oo haddii ay shirkadda lacag ugu soo dhacdo ay doonayaan inay kala baxaan, xitaa haddii lacagtaasi loo sumadeeyay in lagu bixiyo mushaarooyinka shaqaalaha.
Hans Ryberg, madaxa waaxda soo celinta khasabka ee deymaha:
- Haddii aan ku gaarno account-iga shirkadda Saab iyada oo lacagi ku jirto, waxaan ku bixin doonaa deymaha ay shirkadaha illaa iyo hadda noo soo dacwooday ku leeyihiin.
Xitaa haddii lacagtaasi u cayiman tahay shaqaalaha?
- Xitaa haddii lacagtaa loogu talo galay in lagu bixiyo mushaarooyinka shaqaalaha shirkadda Saab.
Dhaqaalaha sabeeynaya oo meel uu sal dhigan doono aan la ogayn ee shirkadda Saab ayaa weli halkiisii ka sii socda, iyadoona weli ey 3 800-ee shaqaale ee shirkaddu weli niyad wanaagsan u hayaan maamulka iyo mustaqbalka shirkaddaba. Inkastoo aan la ogayn inta saburkaasi socon kari doono.
Wax soo saarka shirkadda ayaa istaagnaa illaa iyo bilowgii bishii apriil, iyadoona aanay shirkaddu wax gawaari ah oo ey iibiso aaney bakhaarka ugu jirin. Waxaa sidoo kale ey gawaaridii ka dhamaadeen goobihii lagu iibin jiray baabuurta Saab gudaha iyo dibadda dalkaba, qaarkoodna eyba qandaraaskii dib ula noqdeen.
Shirkadda Saab ayuu la yaalaa dalab gawaari dhan 11 000. 10 000 oo ka mid ah oo shirkadduna lacagteeda qabto ayey ka dhowrayaan shirkadaha shiineeska ee heshiiska kula galay sidii ey saami shirkadda ugu yeelan lahaayeen. Iyadoo dhaqaalihii Milyaardiyada ahaa oo ey ballan-qaadeen shirkadahaasina weli laga dhowrayo in hayadda shiineeska ee ku shaqada lihi aanay weli OK saarin heshiiska shirkadda Saab iyo shirkadaha shiineeska.
Illaa hadda ma jiro wakhti u cayiman oo ay shirkadda Saab hoowlaheeda dib ugu bilaabi doonto. Filitaankii in gabagabada bishan dib mashiinnada warshadda loo kicin doono ayaa u muuqata mid aan waxba ka soo naasa caddayn. Waxaa eyna dad badani is weydiinayaan: Goorta shirkaddani xabaasha geli doonto. Deeymaha oo sii badanaya iyo wax-soo saar la’aanta shirkadda ku habsatay.